ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ (New Version) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ (New Version)
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးသောအခါ (New Version)
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Jun 17, 2017 in Creative Writing, Education, My Dear Diary, Think Different | 23 comments
ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေလည်း အောင်စာရင်းထွက်ပြီ၊ အောင်တဲ့သူတွေ၊ ဂုဏ်ထူးပါတဲ့သူတွေ၊ ကျတဲ့သူတွေ၊ မျှော်မှန်းထားသလောက် မဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ အကုန်စုံနေမှာပါပဲ။ ဘယ်သူကမှတော့ စာမေးပွဲမကျချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆို ဆယ်တန်းဆိုတာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး၊ ဘဝအဆုံးအဖြတ်ဆိုပြီး မှတ်ယူထားကြတာကိုး။
အရင်ကတော့ ဟုတ်ချင်ဟုတ်ခဲ့မယ်။ ဆယ်တန်းမှ မအောင်ရင်၊ ကျောင်းကောင်းကောင်းမှ မတတ်နိုင်ရင် ဂုဏ်ငယ်ရတာလေ။ ဒါပေမယ့် ခုကျ ခေတ်ကပြောင်းသွားပြီ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆယ်တန်းအောင်၊ တက္ကသိုလ်တက်၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတော့ အဲဒီဆယ်တန်းကို ဘဝလုပ်ခဲ့ရတာကို ပြန်တွေးကြည့်ပြီး ရယ်ချင်မိတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်အရ ဆယ်တန်းဆိုတာတော့ အောင်သင့်တယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် မအောင်တော့ရော ဘဝက ပြီးသွားပြီတဲ့လား။ အခု လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာကို ဦးစားပေးနေတာ အားလုံးလည်း သတိထားမိကြမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတစ်ခုခု တတ်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဓိကက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာ သိထားဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ခုဖြစ်နေတဲ့ပြသနာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာဖြစ်ချင်မှန်း၊ ဘာဝါသနာပါမှန်း မသိကြတာ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာဖြစ်ချင်ခဲ့မှန်းမသိဘဲနဲ့ ဖြစ်သင့်တာတွေကိုပဲ ရွေးခဲ့ရတာ။ ခုချိန်ထိလည်း ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာ ကိုက်ညီရဲ့လား မသိသေးဘူး။
ခုချိန်ပြန်တွေးရင် အဲဒီရွေးချယ်မှုက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ မှန်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ နေရာက ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ ပြန်တွေးကြည့်ရင် မရေမရာမသေမချာပါ။ ဒါပေမယ့် ရွေးပြီးသွားရင်တော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာပါပဲ။ ကိုယ်စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်မပါသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူပြီး လုပ်ရမှာပါ။
လက်ရှိပညာရေးစနစ်အရ ကျောင်းသားတွေအားလုံးဟာ တစ်ခုခုတော့ မဖြစ်မနေ ရွေးရမှာပါပဲ။ ဘယ်သူ့ဖိအားမှ မပါဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ် သေချာစဉ်းစားပြီး ရွေးချယ်စေချင်ပါတယ်။ ခေတ်က ပြောင်းနေပါပြီ။ ဆရာဝန်ဖြစ်မှ၊ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှ ဘဝရပ်တည်ချက်ခိုင်မာမယ့်ခေတ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဆယ်တန်းပြီးမှ ဘဝက စရတာပါ။ တကယ့်ဘဝထဲကို ဝင်ဖို့အတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ပညာတွေကို ဆယ်တန်းပြီးမှ စလေ့လာရတော့မှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်မအမြင်နဲ့ အကြံပြုချင်တာက အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာပါ။ သင်တန်းတစ်ခုတည်းတက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဖုန်းထဲမှာ အသံဖိုင်တွေ၊ စာအုပ်တွေ၊ dictionary တွေ ထည့်ထားပါ။ စာကြည့်တိုက်တွေအထိ မသွားနိုင်ရင်တောင် The Best English လို စာအုပ်မျိုးကို ဝယ်ဖတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မွတ်နေအောင် ပြောတတ်ဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခြေခံရှိနေဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ အခြေခံရှိနေရင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ဆက်သင်သွားလို့ရပါတယ်။ (ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အထက်လူကြီးဆီက သင်ယူပြီး ပြောရဲဆိုရဲ ရှိလာခဲ့တာပါ။)
နောက် ကွန်ပျူတာအခြေခံလေ့လာထားပါ။ တကယ်ကောင်းတဲ့ ပညာဒါနသင်တန်းကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ (ဥပမာ မနောရမ္မ)။ Word, Excel ကို ကောင်းကောင်းသုံးတတ်ရင်ကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ Powerpoint ပါ သုံးနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ စာဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ရသစာပေကို များများဖတ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ရသကို ခံစားတတ်မှ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ရှိလာမှာပါ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့သူများလာရင် လောကကို အကျိုးပြုပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အလေးထားတတ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းထွက်ပြီးတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတွေကို ပြောပြချင်တာလေးတွေပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်နေရဆဲပါပဲ။ အားလုံးပဲ ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်နေတာနဲ့ ထပ်တူကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
စီနီယာကြီးများရဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့အကြံပေးအတွေးအမြင်တွေဆိုတော့ အင်မတန်ကို အားရဖွယ်ကောင်းလှပါကြောင်းးး ။
ဦးမိုက်ရဲ့ သားလေးရော .. ဦးဆာရဲ့ သမီးလေးရော အတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း…
လမ်းပြကောင်းတဲ့ မိဘာတွေဆိုတော့ ကလေးတွေ ရွေးချယ်မှုတွေ မှန်ကန်မယ်ဆိုတာ သေချာပါကြောင်း..
ဆယ်တန်းအောင်သူကိုယ်တိုင်.. သူဝါသနာပါရာကို ဆုံးဖြတ်တာက အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိတယ်..။
ကြည့်ရတာ လုံမမ.. ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်သမို့.. အနည်းဆုံးတော့.. စိတ်ချမ်းသာနေပုံရပါတယ်…။
ဆိုတော့.. နောင်တရ(နိုင်)တဲ့အလုပ်.. သိသိကြီးနဲ့.. မလုပ်စကောင်း..။
ဟုတ်.. influence တွေလည်း ပါပေမယ့် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်က အဓိကမို့ လုပ်ချင်တာလုပ်.. ဖြစ်လာသမျှခံ ဆိုပြီး သဘောထားတာတာ
ကျနော့်တုန်းကလည်း. . .ကျလေရဲ့။
ကျတော့လည်း ပြန်ဖြေပေါ့ဟာ.. နော့.. ဘာထူးဆန်းလို့လဲ
နီစာမွဲကျတာ.. နီမပြောရင် ဘယ်သူမှမသိ..
ဘာလို့ဆို.. ခုချိန်မှာ ငါတို့အားလုံး တူတူရုန်းကန်နေကြရတာ..အကုန်တူတူပဲရယ်
ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘဝတစ်ခုလုံးကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သလောက်နီးနီး တဆစ်ချိုးကိုရောက်တာပဲ…
အကောင်းဆုံးက ကိုယ်ဝါသနာပါရာလိုင်းကိုရွေး… တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု ရှိပါစေပေါ့ …
ဝုတ်တယ်လေ … ကိုယ်လျှောက်မည့်လမ်း ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲ…
မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေကတော့ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်သင့်တာတွေ ချပြပေးရမယ်…
ဟုတ်တယ် အူးလေး.. အဓိကက ခေတ်ကို မျက်ခြေမပျက်ဖို့ကလည်း အဓိကပေါ့နော်…
ခု ဘာဖြစ်နေလဲဆို.. အမှတ်တွေထွက်လာပြီဆို ဘာလျှောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး လာလာမေးကြတာ.. ကလေးကလည်းမသိ.. မိဘတွေကလည်း မသိ.. ကိုယ်ကလည်း ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ… လမ်းညွှန်စာအုပ်တွေတော့ ထုတ်ပေးတာပဲ.. သေချာ counseling လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်..
ဒါလေးကို ဟိုက်လိုက်လုပ်ချင်တာခင်ဗျ….တကယ်တမ်းတော့ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကလေးတွေမှာ ..ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ ဥာဏ်ရည်လုံးဝလုံးဝကိုမရှိ… ကိုယ်တွေ့….ကိုယ်တွေတုန်းကလဲ ..ဘာလုပ်ရမယ်..ဘာစိတ်ဝင်စားမှန်းကိုသိကိုမသိ…မိဘရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့ ..လွှမ်းမိုးမှုကလဲ များသောအားဖြင့် ..ကလေးတွေရဲ့ဝါသနာနဲ့တစိမှကိုက်ညီမှုမရှိ….
ဆိုတော့ကာ….ကျော့်အထင်လေ…အလယ်တန်းလောက်ကတဲကစပြီး …သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်က ပရိုတွေက ..ကျောင်းတွေမှာ Presentation လုပ်သင့်ကြောင်း…
ဆိုပါစို့…ဆရာဝန်ကြီးတွေက .ဂျူတီကုတ်ကြီးတွေဝတ်ပြီး..သူတို့ရဲ့ အလုပ်အကြောင်း… သူတို့အလုပ်ရဲ့အားသာချက်..အားနည်းချက်..တွေလာပြောပြမယ်…
လေယဉ်မှုးကြီးတွေက ပိုင်းလော့ယူနီဖောင်းကြီးတွေဝတ်ပြီး ..သူတို့အတွေ့အကြုံတွေ…သူတို့လုပ်ငန်းကရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ…အခက်အခဲတွေလာပြောပြမယ်..
စသဖြင့်…လာပြီး Presentation လုပ်ပေးရင်ဖြင့်..ကလေးတွေအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားတာဘာဆိုတာသိပြီး..ပိုကြိုးစားချင်လာမလား….တိုးတက်လာမလားလို့….
၀က်ပွိုင့်က ဗိုလ်လောင်းတွေကျောင်းဆင်းလို့..စစ်လက်ရုံးရွေးတဲ့အချိန်မှာ သက်ဆိုင်ရာတပ်တွေက.ကျေင်းဆင်းပွဲမှာ.လာလုပ်တယ်လို့ ..မှတ်သားဖူးကြောင်းပါ….
နယူးလန်ဒန်…အန်နာပိုလစ် နဲ့ ကော်လိုရာဒိုစပရင်း ကတော့လုပ်သလားမသိ..army ကတောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ ..navy , airforce နဲ့ Coast Guard ကလုပ်မှာပေါ့လေနော့်….
ဇင်ဘာဘွေစစ်တပ်ကဟာတွေ မသိပဲတော့မနေပါဘူး …
ကချင်သူပုန်တွေတောင် ဒီနည်းသိနေမှကို …
စီးပွားရေးနယ်ထဲမတော့ ..အလုပ်သင်တွေကို ExxonMobil ကဌာနတွေရွေးတဲ့အခါ…ဒီနည်းကိုသုံးတယ်ကြားဖူးကြောင်းပါ
ဟိုးငယ်ငယ်ကတော့ ဘာဖြစ်ချင်လဲဆို ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့…
နောက်များ ဆရာဝန်ဆိုတာ ဘာလဲ သေချာသိလာတဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး.. ကိုယ်က ကြောက်တတ်တာကိုး..
နောက်တော့ မြို့သေးသေးလေးမှာ ကိုယ့်အတွက် အလုပ်ဆိုတာ မယက ရုံးတို့ ဘာတို့က စာရေးတွေပဲ မြင်တာ.. ငါလည်း ကြီးလာရင် သူတို့လိုပဲ လုပ်ရမှာပဲလေ ဆိုပြီး..
အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်အဒေါ်တစ်ယောက်က ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်တယ်.. အရမ်းလည်းတော်တယ်..အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်က ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့.. (အမလေး ဘဝရဲ့ အကြီးဆုံးအမှားမြန်းလားမသိ)
ခုကျ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ မားကတ်တင်းဆိုတဲ့နေရာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်နဲ့ ကိုက်လား မကိုက်လား ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဝေဝေဝါးဝါး
ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့အခါ ကလေးအလိုချည့်လိုက်ပြီးလမ်းကြောင်းလွဲသွားရင်လည်း တစ်ဘဝစာပါပဲ
အစ်မကတော့ စာမကြိုးစားပါဘူး အဲ့တော့အမှတ်လည်းမကောင်းပါဘူး
အဘကရှေ့နေဟောင်းမို့ ကျောင်းပြီးရင်လမ်းကြောင့်းသင့်မယ့် ဥပဒေကိုယူခဲ့တယ်
တစ်လအတွင်းမေဂျာအပြောင်းအရွှေ့တင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ ဥပဒေမှာ ဘော်ဒါဟောင်းတွေမရှိလို့ အိမ်နဲ့အတိုက်အခံလုပ်ပြီး သိပ္ပံတွဲပြောင်းယူခဲ့တယ်
သိတဲ့တိုင်း BA.BSc စပါယာ ဆိုက္ကားနင်းခေတ်မှာ ဘာမှ အသုံးမဝင်တော့ပါဘူး
မြန်မာစာယူခဲ့မိရင်တောင် သပနမှာ ဆရာမလျှောက်လို့ရမယ်
ဒါက ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကြောင့် မှားတဲ့အမှား
ဒီလိုပဲ ကလေးက ဝါသနာပဲ မိဘအတင်းတွန်းတာမျိုးမှာလည်း
အချိန်ကုန်ေ ငွကုန် လူပမ်း
ဒါကြောင့် ဘုရားဟောသလို အလယ်အလတ်လမ်းသာအကောင်းဆုံး
အစ်မတို့တုန်းက မိဘတွေခမျာ စီးပွားပဲကုန်းရုန်းရှာနေရတော့ ပညာရေးကို လမ်းပြပေးနိုင်မှု အားနည်းခဲ့ရတယ်
ယောက်ခမပြောတဲ့ ဆေးကျောင်းကလေး ဂီတဘက်ရောက်သွားတာ မြင်ဖူးတယ်.. နှမြောဖို့ကောင်းတယ်..
အဓိကက ဝါသနာက ဘဝအာမခံချက်မရှိသလို ဖြစ်နေတာ..
ခု ဒီဘက်ခေတ်မှာ ကလေးတွေ အတော်ကံကောင်းကြပါတယ်.. သင်တန်းတွေမှ အပြည့်.. အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာတွေ အကုန်လေ့လာလို့ရတယ်.. ကိုယ်တွေလို ယောင်တောင်ပေါင်တောင်နဲ့ အလုပ်ထဲတန်းဝင်လိုက်ရတာမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူး..
ဆယ်တန်း အောင်မှ အမှတ်ကောင်းမှ လူရာဝင်မယ် လဲ မသင်ဘူး။ ( ဘာမှ မှ မထူးတာ၊ တစ်နှစ် နှစ်နှစ် လောက် ကြွားလို့ပဲရတယ် )
ဆယ်တန်း မအောင်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးကွာ လို့လဲ မသင်ဘူး။ ( တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက် ဟာ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ် အကြီးကြီး တပ်ထားတုန်းပဲ )
ဒါတွေကတော့ ဒီလို ရှိတယ်ဟေ့။ မင်းကို အရှိ အရှိ အတိုင်း မြင်အောင် ပြောပြထားမယ်။
အမှန်အတိုင်း မြင်နိုင်အောင် သင်ပေးနိုင်ရင် ကျေနပ်ပြီ။
ဆယ်တန်း အောင်ပြီးရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာက ဆယ်တန်း စတက် လောက်ကထဲက ပြင်ဆင် ထားသင့်တာ။
ဥပမာ ဆရာဝန် ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုပြီး ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာ တွေ လုပ်နေရင်တော့လဲ ဟဟ ပဲရမယ် ပေါ့လေ။
ဒီမှာ အမေ ပြောနေကျ အရှင် ဆန္ဒာဓိက စကား ကို ပြန် ပြောရရင်
“အကြောင်း ကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။ အကျိုးကောင်း ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။” တဲ့။
ဆရာတော် က အစထဲက ဆယ်တန်း ပြီးရင် ဘုန်းကြီး ဝတ်မယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ရှိပြီးသား။
ဒါပေမယ့် ဆယ်တန်း ဖြေတော့ ပြီးပြီးရော မဖြေဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး မှာ အမှတ် အများဆုံး စာရင်းထဲ ပါအောင် ဖြေခဲ့တယ်။
သူ ဆယ်တန်း မှာ တော့ပ်တန်း ဝင်တာက သူ လုပ်နိုင်တာကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာပါ။
ဒီလို ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ အင်ဂျင်နီယာကြီးတွေ လုပ်လိုက်မယ် ဆိုပြီး ကြိုးစားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ သာသနာ့ဘောင် ဝင် ခဲ့တော့ သူ့ရဲ့ ခရီးလမ်း ကို အများကြီး အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့။
(တော့ပ်တန်း ဝင် ပြီး ဘုန်းကြီး ဝတ်သွားတဲ့ ကောင်လေး ဆိုပြီး လူ စိတ်ဝင်စား လူသိများတာပေါ့။)
Goal setting လို့ ပြောရမလား…ကိုယ်တွေမှာ အဲဒါတွေ အားနည်းတယ်…
မီးစင်ကြည့်ကမယ်ဆိုတာက များနေတာ ..
သေချာပြင်ဆင်တတ်ဖို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခဲ့ရင် ကောင်းတာပေါ့နော်..
ကိုယ်တွေလည်းဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကိုရီးယားရူးပြီး သင်ခဲ့တာလေးကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါတောင်တကယ့်လက်တွေမှာ ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆက်ပြီးသင်နေရတုန်းပဲ
ဘာသာစကားတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်လုိ့မရဘူး… ဒါပေမယ့် ဘာသာစကားကို အခြေခံပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်နိုင်တာတွေတော့ အများကြီးရယ်.. Fighting!!!!
ကိုယ်တွေတုန်းကတော့ သိပ်မစဉ်းစားခဲ့ရဘူး .. အမှတ်က ဆေးမမှီ စက်မှုသာမှီလို့ မှီတဲ့ဟာတက်လိုက်ရတယ် ..
သိပ်ဝါသနာမပါပေမယ့် အခြေအနေကအရမ်းကြီးတော့မဆိုး .. ပါရမီပါပုံရတယ်လို့ ခန့်မှန်းမိလို့ နောင်တမရဖြစ်ခဲ့ဘူး .. ယနေ့အထိ အသက်မွေးမှုပြုနိုင်လို့ ရွေးချယ်မှုအပေါ် ကျေနပ်မိတယ် …
အမှန်တော့ အင်ဂျင်နီယာ ဝါသနာပါတယ်.. ကိုယ့်အခြေအနေတွေက ရွေးလို့မဖြစ်ခဲ့လို့သာ
ဘွဲ့ရမှ ပညာတတ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင် ဆယ်တန်းလေးတော့ အောင်အောင် ဖြေစေချင်တယ်။(ဆယ်တန်းရောက်အောင် တက်မိရင်ပေါ့)
ဟိုအရင်ကလို ဘီနဲ့ အောင်စာရင်းလေးထွက်ပေးရင်လည်း ကောင်းမှာပဲ။
ကလေးတွေ အချိန် တနှစ်မနာဘူးပေါ့.
ဘီနဲ့ အောင်သူမှာလည်း ဂျီတီအိုင်တက် ပြီးရင် စက်မှုတက္ကသိုလ်ပြန်တက်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
ဆရာအတတ်သင်လည်း ဆက်တက်လို့ ရခဲ့ဖူးတယ်။
မဆလ ခေတ်တောင် ပြန်တမ်းတရမလိုဖြစ်နေတယ်။
၁၀တန်းဆိုလို့ ကြုံတုန်းလေး…ကျနော်က ပထမနှစ်လုံးလုံးကျသဗျ
ဒုတိယနှစ်မှာ ဘီလစ်နဲ့အောင်သဗျ..ဂျီတီအိုင်ဝင်ခွင့်ဖြေတော့လည်း မအောင်(ကျူရှင်မှမတက်နိုင်တာ)
ဘီလစ်က တပ်ထဲဝင်ရင်တပ်ကြပ်ကြီးစာရေး တန်းရသဗျ..သူငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများဝင်ကုန်တယ်
ကိုယ်ကတော့ဝင်ငွေနဲနဲကောင်းတဲ့အလုပ်လေးရနေတော့မ၀င်ဖြစ်သေး ( စိတ်ထဲတော့တေးထားတယ်..နောက်နှစ်တပ်ထဲဝင်မယ်ပေါ့)
ဒီလိုနဲ့တတိယနှစ်ဖြေပြီးတော့ အဖေက ရန်ကုန်တပ်ကိုပြောင်းရတယ်…အဲ့နှစ်မှာပဲကျုပ်ကလည်း
စာပေးစာယူတက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ကြံတော့ အဖေကအတင်း ဒေသကောလိပ်တက်ခိုင်းတယ်..သူတို့သား
အမှတ်တွေကအလယ်အလတ်ပါ…57 61 64 66 66 58……….